Fiheverana momba ny fananganana Vs mividy MarTech | Martech Zone
Ny fanontaniana raha hanangana na hividy rindrambaiko dia adihevitra maharitra eo amin'ireo manam-pahaizana manana hevitra isan-karazany amin'ny Internet. Ny safidy hananganana rindrambaiko ao an-trano anao manokana na hividy vahaolana vonona manokana ho an'ny tsena dia mbola mitazona olona maro hanapa-kevitra. Miaraka amin'ny tsena SaaS miroborobo amin'ny voninahiny feno izay hamaritana hahatratra USD ny haben'ny tsena 307.3 miliara amin'ny 2026, manamora ny fanajan'ireo marika ny serivisy tsy mila mitazona fitaovana na loharano hafa.
Alohan'ny hidirantsika mivantana amin'ny adihevitra momba ny build vs buy, andao isika hijery izay niainan'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny làlan'ny fividianana revolisiona.
Ny revolisiona niomerika dia manana mpanjifa mitam-piadiana miaraka amina smartphone, tablette ary mpampiasa ankehitriny dia mitaky sy manantena serivisy, amin'ny famolavolana ireo tolotra vokatra nohaniny. Lasa ny andron'ny marika mibaiko sy mitaona ny andrasan'ny mpanjifa. Na dia nisy fiantraikany tamin'ny fizotry ny fanapaha-kevitra aza ny havizanana safidy sy ny habibiana safidy, ny motera fampitahana ny vidiny, ampiarahana amin'ny feon'ny Key Opinion Leaders (KOLs) sy ny influencers, dia manampy ny mpampiasa hanao fividianana vaovao.
Làlan'ny fividianana maoderina
Ny fiovan'ny dinam-pahefana eo amin'ny mpanjifa sy ny marika dia nanamboatra ny làlan'ny fividianana nentim-paharazana. Ny làlan'ny fividianana maoderina, entin'ny fandrosoana ara-teknolojia sy loharanom-baovao marobe, dia naka ny vokatra avy eo amin'ny talantalana fivarotana ary nametraka azy ireo tao anatin'ny tontolo iainana nomerika, nihoatra ny sakana ara-jeografika mba hampandeha tsara ny fifanakalozana.
Source: Torolàlana ho an'ny mpividy MoEngage momba ny fifandraisan'ny mpanjifa
Ity sary etsy ambony ity dia maneho ny fomba nandehanan'ny tsingerin'ny dian'ireo mpanjifa fiovana paradigma goavambe, izay nanova ny fifandraisan'ny marika ho an'ny mpanjifa sy ny famatsiana voatosika hangataka ny fangatahana.
Raha jerena ireo teboka etsy ambony ireo momba ny tanjon'ny marika hahatongavana ho mpanjifa bebe kokoa amin'ny asany, dia zava-dehibe kokoa ny famahana ny olana momba ny fananganana vs mividy. Saingy tsy mahitsy izany. Alohan'ny hanapahanao hevitra raha tsara kokoa ny manangana sehatra amin'ny alàlan'ny fikororohana na mahazo teknolojia efa misy, ireto misy lafin-javatra roa tokony hodinihinao:
Ny vola lany amin'ny fananganana na fividianana: Ny fananganana zavatra avy any am-boalohany dia ho goavana arakaraka ny haben'ny ekipa / orinasa ary mila manisa ny ora amin'ny ora, ny fotodrafitrasa ary ny vidin'ny fikojakojana ianao, izay samy sarotra ny manombatombana tsara. Mandritra izany fotoana izany ny fividianana vahaolana hanomezana fahafaham-po ny filàna samihafa ao anatin'ny ekipa iray dia mety mila mandinika ny saram-pitsarana izay miovaova arakaraka ny fanisan'ny mpampiasa mavitrika sy ny serivisy ampiasaina.
Loza miaraka aminao rehefa mividy na manorina: Ny tena risika ateraky ny fividianana dia ny fifehezana voafetra sy ny fidirana amin'ny rindrambaiko, kaody loharano ary bug, mandritra izany fotoana izany amin'ny fananganana vahaolana ny risika lehibe indrindra dia ny fahafahan'ny ekipa fampandrosoana izay mety hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana.
Voavaha tamin'ny alàlan'ny vahaolana ny olana: Tsy fahendrena ny mandalo ny fahasahiranana amin'ny fananganana zavatra manam-pahaizana manokana avy amin'ny rangotra raha tsy manampy mivantana izany. Ampirisihina hividy zavatra ilain'ny orinasa tsirairay ianao ary hanangana izay manavaka anao.
Track record an'ny ekipa fampandrosoana: Fandrefesana ny fahaiza-manaon'ny ekipan'ny fampivoarana sy ny fahamatorany amin'ny fahaizana, fahakinganana ary fahaiza-manao. Raha mahatratra ambaratonga tsara izy ireo, dia misy dikany kokoa ny fananganana rindrambaiko ao an-trano raha oharina amin'ny fividianana vahaolana vonona amin'ny tsena.
Misy loharano azonao ampiasaina: Fanapahan-kevitra lehibe ny tetibola raha mividy vs miady hevitra. Ny fetra farany avo lenta ampiasain'ny marika dia manome fananganana kokoa ny rindrambaiko. Ho an'ireo orinasa manana teti-bola voafetra, ny fividianana vahaolana dia fomba mora hiatrehana izany.
Fepetra takiana amin'ny tsena: Ny iray amin'ireo zava-dehibe tokony hodinihina dia ny fividianana vahaolana dia ny paikady mandeha haingana any amin'ny tsena satria azo ataterana ao anatin'ny valo ka hatramin'ny enina ambin'ny folo herinandro (miankina amin'ny fahasarotan'ny tranga fampiasana) raha ampitahaina amin'ny volana na taona azonao atao raiso ny fananganana sehatra ao an-trano.
Ny laharam-pahamehan'ny orinasanao: Raha manangana ny vahaolana manokana ao anaty ianao, ho laharam-pahamehana amin'ny orinasao ve izany? Mety tsy izany, izay mety hitarika azy io ho mpanakana ny fandrosoana raha tsy afaka manohy mampiasa vola ao aminy ny orinasanao. Ny teknolojia dia ao anatin'ny tsingerin'ny fanovana tsy tapaka, tsy tetik'asa iray sy vita fotsiny izany. Ny orinasa mamorona vahaolana azonao vidina dia miankina amin'io vahaolana mivoatra io ary manohy manome lanja ny mpanjifany.
Ny olona iray dia tokony hialana amin'ny fandaniam-potoana amin'ny fananganana sy famoronana zavatra izay efa voaorina tsara eny an-tsena. Ny tanjona farany ho an'ny marika dia ny hanome ny mpanjifa ny traikefa tsara indrindra ao an-dakilasy ary raha ampitaina amin'ny teknolojia efa misy izany, tokony handany fotoana be sy hery hananganana vahaolana ve ny iray?
Ny fifantohana manan-danja kokoa ho an'ny orinasa dia ny manasongadina ny traikefa natolotry ny olombelona izay omen'izy ireo isaky ny mombamomba ny mpampiasa ary manatsara ny fanohanan'ny mpanjifany sy ny serivisiny. Ny elanelana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny fahaizan'ny marika manatanteraka azy ireo dia iray amin'ireo olana lehibe tadiavin'ny mpitantana ankehitriny hamaha azy. Mba hahatakarana ny fiovan'ny fanantenan'ny mpanjifa, zava-dehibe ny manamarika ny fanovana ny asan'ny mpampiasa sy ny fihetsika miaraka amin'ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Tags: fifandraisana amin'ny marikamanangana mifanohitra mividymanangana vs mividyMpanjanantanyandrom-piainan'ny mpanjifafampandrosoanateknolojia vao misondrotrain-tranoteknolojia marketingMartechteknolojia talohahaitao lany androlalana mividyteknolojia
Smarketing: fampifanarahana ny ekipan'ny varotra sy ny varotra B2B anao